(Dhegayso) Wasaaradda Degaanka Puntland oo ka digtay in la ugaarsado xayawaanka Diinka. | puntlandi.com
Thursday, January 4th, 2018 | Posted by P2
(Dhegayso) Wasaaradda Degaanka Puntland oo ka digtay in la ugaarsado xayawaanka Diinka.
Garowe (Puntlandi) Wasaaradda Degaanka iyo duurjoogta dowladda Puntland, ayaa maanta digniin adag kasoo saartay in lagu xadgudbo xayawaanada Duurjoogta ah, gaar ahaan xayawaanka Diinka kadib markii waayahaan ay soo baxayeen in ugaarsi xoogan lagu hayo, si looga ganacsado.
Agaasimaha guud ee wasaaradda Degaanka, Cabdicasiis Nuur Cilmi (Koor) oo warbaahinta shir jaraa’id ugu qabtay, Garowe, ayaa sheegay in tilaabo adag laga qaadidoono cid kasta oo isku dayda ama lagu helo iyadoo ugaarsanaysa Xawayaankaan, oo kamid ah xayawaanada horey uga badbaaday gacanta binu’aadamka.
Agaasimuhu wuxuu ugu baaqay shacabka ku dhaqan dhulka miyiga ah inay wasaaradda Degaanka iyo laamaha amniga kusoo wargaliyaan cidii lagu arko falkaan iyadoo gacmaha kula jirta.
“Noole kasta oo ku nool gayiga Puntland wuxuu leeyahay xuquuq iyo in laga ilaaliyo wixii dhibaato ku ah naftooda, sidaas daraadeed dowladda Puntland waxay ka digaysaa in Diinka la ugaarsado,” ayuu yidhi agaasimuhu.
Koor, ma sheegin wax kiis ah oo Puntland ka dhacay oo la xiriira arrinta Diinka, laakiin wuxuu sheegay dadka inay sii xasuusinayaan in Diinku yahay Xayawaanada ahmiyada weyn ugu fadhiya Puntland. Waxaa kale oo uu ka digay wararka aan xaqiiqada lahayn ee baraha bulshada lagu faafinayo ee ah in Puntland uu ka socdo ugaarsiga Diinka.
Halkaan ka dhegayso codka Agaasimaha.